Somali Dirty Jokes - Page 2 - General - Somali Forum - Somalia Online
By Jacaylbaro, February 4, 2013 in General
Waxaa la yiri maalinbaa wiil yar hooyadii ku yiri hooyo waxaan arkay nin inta kaadshay dhulka isaga tirtiray markaasay tiri iga aamus mindhaa alla ka googii ku dhalay baan dhul isaga tirtirine
Bal aan ku darsado...although I am afraid mine will need some censoring.
lamaane da'a ah ayaa habeen oo dhan qosolkooga darisku ka seexan waayay, islaan jaarka ahayd ayaa maalinkii danbe u tagtay islaantii kale oo ku tidhi "Habeen oo layl waad qososhaan, dee da'adii gogosha la iskaga qoslin jirayna waad dhaafteen , ee sidee bay wax u jiraan" ,,waxay ugu jawaabtay " odaygu hadeer waa da' oo xubintiisu waa hawl gabtay, ee inta aan kor u qabto ayaan ku sharadnaa dhinaca uu u dhici doona, hore misa gadaal misa cidhifyada....kolba markuu dhinac u dhacaba waa qosolnaa"
waxaas baa jacayl ah...the old man needed some drug to help him out.
Hahahahaha @ coofle, Afkaaga caano baqay lagu qabay
hada ka hor aya waxa dhacday,
Oday hal geel ah lahaa aya waxay u dhashay nirig. usually reer baadiyaha macwiis ayay xirtaan marka maalin isagoo bilaaway inuu liso hasha aya nirigtii yareyd soo carartay then bilowday iney nuugto alaabtii ninka ku talay oo ay moodo naaskii hooyadeed (geela istaag aya lagu lisaa iyo labada lug, midbaa cagta jilibka lagu qabtaa si loogu celiyo harawga ama weelka lagu shubayo canaha). markas ba waxa dhacday in wiil yar oo odayga dhalay lana joogay markaas ku dhaho odaygii: Aabow nirigtii shuftay jaqaysaa. markaas buu odaygii yiri naga dhaaf hanooga mashquushee intaan ka dhamaynayo lisida caanaha. looooooooooooooolz
Oday iyo islaan mudo dheer isqabay ayay islaantii dareentay in uu odaygii hawlgab noqday oo aanu sidiisii hore hawsha u kala tuurin, waxay u tagtay sheekh ay u ugaga cabatay dhibta haysata. Sheekhiibaa ku yidhi odaygaagu diinta ma jecelyahay, gaaladana ma necebyahay. Haa bay ugu jawaabtay. markaasu ku yidhi waxaad ku tidhaa "waxa la yidhi markaan hawsha samaynaba gaal baa dhimanaya". Duqdii baa warkii odaygii ula tagtay, odaygiina hawlgal culus buu bilaabay, markuu in mudo ah sidaa ku shaqaynayay ayuu daalay oo dhabarku xanuunay. Habeenkii danbay duqdii u yeedhay oo tidhi kaalay xaajow aan gaaladdii laynee. Odaygii inaga daa ha iska nooladaan iyagaba Allaa abuurtaye, haddii la dhamaynayo Sayidanaa Cali baa seeftiisa ku dhamayn lahaa
weak jokes !
^ ^ Bring your own strong ones then
Wife: War si fiicaan oo geeli
akhyaar ayaa gabar saliid u marinaayey waxa uu saliidii ugu sii daliigoba gabadhii ayaa is celin weyday, dareemahaa kacay xariifkii halkii laga rabay inuu dhameestirto ayuu dhahay AX!! hada oo kale ayey nin u baahan tahay!! :D
Now the dirtiest Joke ever posted on SOL.....Viewer discretion is advised..esp the UNUKA people, no offense meant, I like your people....
A man of the Unuka people of muqdisho was performing bedtime obligations with his wife, she was a mother of 8 kids, all of them delivered naturally from the birth canal!.... Down there she was like Siberia (all wide and cold) ... the room was very dark, in a split of second the blessed husband stepped into the wrong door, suddenly he felt like he have stepped to some equatorial place (warm and humid) the wife screamed.....""waraa xaayaw, waraa xaayaw, muhu muhiisii maaha" in a split of second with a big smile in his face he replied ""Muhiisuu ku miyir qabaaye iska dhaaf""..!!!!! his days were better after that, I guess!....